Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Onye na -eme ihe, Andrew Wood, Onye isi ala ọhụrụ nke SKAL ASIA
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
SKAL enweghị ike ịhọpụta onye ndu ka mma ka ọ duru SKAL Asia na ndị otu ya gafee akụkụ ikpeazụ nke nsogbu COVID-19. Andrew Wood nwere ihe ọ na -ewe.
"Otu onye n'ime anyị bụ onye isi oche SKAL Asia ugbu a", kwuru eTurboNews Onye nkwusa Juergen Steinmetz. Andrew bụ otu na -enye aka na mgbasa ozi anyịn ka Thailand anyị gbara akwụkwọ ozi ọtụtụ afọ.
Na AGM mepere emepe nke Skål International Asia nke emere na mbido taa ọgbakọ ọgbakọ ọgbakọ ọgbakọ nke iri ise na mpaghara Asia wee họpụta Andrew J Wood Onye isi ala 50-2021.
Tupu ntuli aka, Osisi, nke a na -ewere dị ka otu n'ime Skålleagues nke a na -ahụkarị na mpaghara, bụ onye isi oche Skål Asia (Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ).
Otu onye Skål maka afọ 29, a họpụtara ya nke mbụ na bọọdụ Eshia na 2005. Wood, onye ga-emecha oge nke abụọ ya dị ka onye isi oche nke ọgbakọ kacha ochie na Thailand-Bangkok, ga-enyefe James Thurlby, Onye isi ala ọhụrụ nke Bangkok.
Skål Asia nwere ndị otu 2529 na klọb 39, 28 ejikọtara na kọmitii mba 5, yana klọb nwere mmekọ 11, Skål Asia Mpaghara (SAA) bụ mpaghara dị iche iche na Skål. Mpaghara Eshia si na Guam na Oke Osimiri Pasifik gafere ihe karịrị puku kilomita iri ruo Mauritius na Oke Osimiri India yana klọb na mba 10,000 na-adọrọ mmasị n'etiti. Mpaghara Eshia ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent iri abụọ nke ndị otu Skål International zuru ụwa ọnụ.
“Maka ndị Asia Skalleagues m niile, a na m asị na dị ka ọtụtụ ndị isi n'ihu m, ọrụ a dị n'ihu anyị na -eweda m ala, na -enwe ekele maka ntụkwasị obi ị nyefere.
"Ana m echeta ruo mgbe ebighi ebi maka mba iri na ise anyị na -eje ozi n'okpuru Skål Asia na mkpa ọ dị ijikọ aka ọnụ iji wulite njikọ enyi na enyi na ntọala siri ike", Onye isi ala a họpụtara ọhụrụ Wood kwuru.
“Skålleagues ebe niile ka kwesịrị ntụkwasị obi n'echiche nke ndị nna nna anyị nke Obi Ụtọ na Enyi. Otu a ka ọ dị na ọ ga -adịrịrị na ọgbọ ọhụrụ nke Skålleagues.
“Iwulite àkwà mmiri, mmetụta ọmịiko, na ọmịiko ga -abụ ihe mbụ m. Mgbe oria ojoo a gachara, mgbe oge ruru, ọ dị anyị mkpa ibili, pụta pụta tụba aka anyị wee hapụ ka ọkụ banye n'ime ndụ anyị ọzọ, "Onye isi ala Wood kwuru.
Wood gbakwara ndị otu ya ume ka ha jiri nchekwube na -ele anya ọdịnihu, “Ọnọdụ akụ na ụba anyị nwere ike mebie nke ukwuu n'ihi oke ala mechiri emechi. Ọ dịghị onye nwere ike leda mbibi zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ anyị. Agbanyeghị, o nyela anyị ohere a na -adịghị ahụkebe ka ịpị bọtịnụ nrụpụta, mezie mmejọ ndị gara aga wee mee ka ọ dị mma.
Ọ gbakwụnyere, "ụwa ọhụrụ nke njem na njem na -echere. Ụwa ọhụrụ agụụ na -agụ ime njem, nke ahụ dị n'udo, na -adigide na Skål Asia ga -ebuwanye ibu, nwee enyi na olileanya. "
Onye nkwusa eTN Juergen Steinmetz, onye bụkwa onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa Ọ sịrị, "Amaara m Andrew ọtụtụ afọ. Ebe ọ bụ GM nnukwu Bangkok Hotel, ọ bụ ezigbo onye ahịa eTurboNews.
“Mgbe ọ lara ezumike nká, ọ ghọrọ onye na -enyekarị aka n'akwụkwọ anyị. Ọ sonyekwara na World Tourism Network (WTN) dika onye otu. N'ịbụ onye otu SKAL n'onwe m, ekwenyesiri m ike na SKAL Asia mere mkpebi mara mma ịhọrọ ezi onye ndu, onye na -eme ihe na nwoke nwere ọhụụ.
“Onye ndu ya ga -emepe ohere ọhụrụ n'etiti SKAL Asia na World Tourism Network. Andrew, ekele! ”
Ebe enweghị ọgbakọ na ụwa Skål kemgbe mmalite oria ojoo afọ abụọ gara aga, Wood kwuru na obi dị ya ụtọ na atụmatụ ebidola nke ọma maka ọgbakọ Skål Asia Area Congress na June 2 mgbe Thailand ga -anabata ndị mmụọ nsọ na -enye ume ọhụrụ #RediscoverThailand Asia Area Congress nke a na -atụ anya na ọ ga -adọta ndị nnọchiteanya 2022 maka ọgbakọ ụbọchị anọ (abalị atọ).
Onye isi oche Skål Asia kwubiri site n'ikwu, “Ihe ịma aka anyị na -eche ihu taa maka ụwa ọhụrụ nke na -aga echi, dị adị n'ezie. Ha dị oke mkpa na ha dị ọtụtụ. Anaghị m ekwupụta na ọ ga -adị mfe ma ọ bụ zute ngwa ngwa, mana a ga -ezute ha. Echi abịala. ”